ဖရက်ဒ်ဟာ အခုထိ မန်ချက်စတာမြေကို မသိမ်းပိုက်နိုင်သေးပါဘူး
မန်ချက်စတာလမ်းမပေါ်မှာ လမ်းပျောက်နေတဲ့ ဘရာဇီးလ်က ကြယ်တစ်ပွင့်
16 Nov 2018 . 2:33 PM
မန်စီးတီးရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး မန်ယူအသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တုန်းက ဘရာဇီးလ် ကွင်းလယ်လူ ဖရက်ဒ် Fred က အခုလိုပြောခဲ့တယ်။ “မော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသလွန်းတဲ့ နည်းပြတစ်ဦးပါ။ ကစားသမားတိုင်းက မော်ရင်ဟိုလို အောင်နိုင်သူ နည်းပြတစ်ဦးနဲ့ လက်တွဲလိုကြသူတွေချည်းပါပဲ။ သူ့ဆီက ကျွန်တော် သင်ယူစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မန်ယူကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကလည်း မော်ရင်ဟိုကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရည်အသွေးအပေါ် သူ အလေးထားခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ဖရက်ဒ်ဟာ မန်ယူအသင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ပွဲတွေဆိုရင် အရန်ခုံမှာပဲ အချိန်ဖြုန်းနေရပြီး ချယ်လ်ဆီး၊ မန်စီးတီး၊ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့နဲ့ပွဲမှာ ကွင်းထဲမှာတောင် ခြေချခွင့် မရခဲ့ဘူး။ မန်ယူအသင်းဆီ ဘာလို့ပြောင်းခဲ့တာလဲလို့ ဖရက်ဒ်ကို အခု မေးရင် အရင်တုန်းကလို ပြန်ဖြေနိုင်ပါဦးမလား။ မန်ယူဟာ ဖရက်ဒ်အတွက် ပေါင်(၅၂)သန်းအထိ အသုံးပြုခဲ့ရပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပဉ္စမမြောက် ကြေးအကြီးဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။
ကွင်းလယ်မှာ ပေါ့ဘာ Paul Pogba နဲ့ တွဲဖက်ပြီး တိုက်စစ်ကို မောင်းနှင်ကစားနိုင်မယ့်သူအဖြစ် ဖရက်ဒ်ကို ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမယ့် မန်ချက်စတာမြေကို အခုအချိန်အထိ ဖရက်ဒ် မသိမ်းပိုက်နိုင်သေးပါဘူး။ ကစားသမားတစ်ဦးကို Big Match တွေမှာ အရန်ခုံထိုင်ခိုင်းတဲ့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ လုပ်ရပ်ကလည်း အဲဒီကစားသမားရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ချိုးဖဲ့နေသလိုပါပဲ။ သြဂုတ်လကတည်းက မန်ယူအတွက် ဖရက်ဒ် ပွဲထွက်ကစားခဲ့ရတာက (၆)ပွဲပဲရှိပြီး အဲဒီပွဲတွေမှာလည်း ပွဲချိန်ပြည့်ကစားရတာကလည်း နည်းပါးလွန်းပါတယ်။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားဟန်နဲ့ အသားကျဖို့ အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာ Auto Understood ပါ။ မန်ယူအသင်းအတွက် ဖရက်ဒ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဖရက်ဒ်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်း
ဒီမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရင် ဖရက်ဒ်ဟာ မန်ယူအတွက် မှားယွင်းတဲ့ခေါ်ယူမှုလို့ လုံးလုံးလျားလျားကြီး မသတ်မှတ်နိုင်သေးပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု စွမ်းရည်က (၈၇.၅)ရာခိုင်နှုန်းရှိသလို အခွင့်အရေး (၇)ကြိမ် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (၁၀)ကြိမ်မှာ ဂိုးပေါက်တည့်ချက် (၂)ကြိမ် ရှိခဲ့တာက တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ဘောလုံးဖြတ်ထုတ်မှု (၁၄)ကြိမ်မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ ဖြတ်ထုတ်မှုက (၆)ကြိမ်သာရှိခဲ့တယ်။ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒင်ဟို Fernandinho (ဖရက်ဒ်နဲ့လည်း ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်း)လို ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ မန်ယူပရိသတ်တွေကလည်း ဖရက်ဒ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်နေကြတယ်။ သေချာတာက မန်ယူအသင်းဟာ ဖရက်ဒ်ကို အသင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လို့ ခေါ်ခဲ့တာထက် ပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအသင်းဆီ မရောက်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တာလို့လည်း သတ်မှတ်ရမယ်။
မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့လည်း ကြေးကြီးပေး ခေါ်ယူထားတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို အသင်းမှာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့်အခြေအနေမျိုး ဖန်တီးပေးသင့်နေပါပြီ။ တကယ်လို့ မန်စီးတီးကိုသာ ဖရက်ဒ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ဆို ဘာမှကို ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ ဘရာဇီးလ် ကြယ်တစ်ပွင့်ဟာ မန်ချက်စတာ လမ်းမထက်မှာ လမ်းပျောက်နေပါပြီ။ သူ အမြန်ဆုံး လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပါ . .
Photo:Sport360,SepakBola.com,jovempa,UOL Esporte,TheWorldNews,Getty Images,Twitter
မနျခကျြစတာလမျးမပျေါမှာ လမျးပြောကျနတေဲ့ ဘရာဇီးလျက ကွယျတဈပှငျ့
မနျစီးတီးရဲ့ ကမျးလှမျးမှုကို ငွငျးဆနျခဲ့ပွီး မနျယူအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့တုနျးက ဘရာဇီးလျ ကှငျးလယျလူ ဖရကျဒျ Fred က အခုလိုပွောခဲ့တယျ။ “မျောရငျဟို Mourinho ဟာ ပရျောဖကျရှငျနယျ ပီသလှနျးတဲ့ နညျးပွတဈဦးပါ။ ကစားသမားတိုငျးက မျောရငျဟိုလို အောငျနိုငျသူ နညျးပွတဈဦးနဲ့ လကျတှဲလိုကွသူတှခေညျြးပါပဲ။ သူ့ဆီက ကြှနျတျော သငျယူစရာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ မနျယူကို ပွောငျးရှခေဲ့တာကလညျး မျောရငျဟိုကွောငျ့ပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အရညျအသှေးအပျေါ သူ အလေးထားခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ဂုဏျယူမိပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ ဖရကျဒျဟာ မနျယူအသငျးရဲ့ အရေးပါတဲ့ပှဲတှဆေိုရငျ အရနျခုံမှာပဲ အခြိနျဖွုနျးနရေပွီး ခယျြလျဆီး၊ မနျစီးတီး၊ ဂြူဗငျတပျဈတို့နဲ့ပှဲမှာ ကှငျးထဲမှာတောငျ ခွခေခြှငျ့ မရခဲ့ဘူး။ မနျယူအသငျးဆီ ဘာလို့ပွောငျးခဲ့တာလဲလို့ ဖရကျဒျကို အခု မေးရငျ အရငျတုနျးကလို ပွနျဖွနေိုငျပါဦးမလား။ မနျယူဟာ ဖရကျဒျအတှကျ ပေါငျ(၅၂)သနျးအထိ အသုံးပွုခဲ့ရပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပဉ်စမမွောကျ ကွေးအကွီးဆုံး ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။
ကှငျးလယျမှာ ပေါ့ဘာ Paul Pogba နဲ့ တှဲဖကျပွီး တိုကျစဈကို မောငျးနှငျကစားနိုငျမယျ့သူအဖွဈ ဖရကျဒျကို ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပမေယျ့ မနျခကျြစတာမွကေို အခုအခြိနျအထိ ဖရကျဒျ မသိမျးပိုကျနိုငျသေးပါဘူး။ ကစားသမားတဈဦးကို Big Match တှမှော အရနျခုံထိုငျခိုငျးတဲ့ မျောရငျဟိုရဲ့ လုပျရပျကလညျး အဲဒီကစားသမားရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ခြိုးဖဲ့နသေလိုပါပဲ။ သွဂုတျလကတညျးက မနျယူအတှကျ ဖရကျဒျ ပှဲထှကျကစားခဲ့ရတာက (၆)ပှဲပဲရှိပွီး အဲဒီပှဲတှမှောလညျး ပှဲခြိနျပွညျ့ကစားရတာကလညျး နညျးပါးလှနျးပါတယျ။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ကစားဟနျနဲ့ အသားကဖြို့ အခြိနျယူရမယျဆိုတာ Auto Understood ပါ။ မနျယူအသငျးအတှကျ ဖရကျဒျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျမှတျတမျးကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
ဖရကျဒျရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ စှမျးဆောငျရညျမှတျတမျး
ဒီမှတျတမျးကို ကွညျ့ရငျ ဖရကျဒျဟာ မနျယူအတှကျ မှားယှငျးတဲ့ချေါယူမှုလို့ လုံးလုံးလြားလြားကွီး မသတျမှတျနိုငျသေးပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု စှမျးရညျက (၈၇.၅)ရာခိုငျနှုနျးရှိသလို အခှငျ့အရေး (၇)ကွိမျ ဖနျတီးနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု (၁၀)ကွိမျမှာ ဂိုးပေါကျတညျ့ခကျြ (၂)ကွိမျ ရှိခဲ့တာက တိုကျစဈစှမျးဆောငျရညျ အားနညျးတယျလို့ ဆိုရမှာဖွဈပွီး ဘောလုံးဖွတျထုတျမှု (၁၄)ကွိမျမှာလညျး အောငျမွငျတဲ့ ဖွတျထုတျမှုက (၆)ကွိမျသာရှိခဲ့တယျ။ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ဘရာဇီးလျကှငျးလယျလူ ဖာနနျဒငျဟို Fernandinho (ဖရကျဒျနဲ့လညျး ရငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြး)လို ဖွဈလာဖို့ မြှျောလငျ့နတေဲ့ မနျယူပရိသတျတှကေလညျး ဖရကျဒျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို အားမလိုအားမရဖွဈနကွေတယျ။ သခြောတာက မနျယူအသငျးဟာ ဖရကျဒျကို အသငျးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျလို့ ချေါခဲ့တာထကျ ပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးအသငျးဆီ မရောကျအောငျ ကွိုးပမျးခဲ့တာလို့လညျး သတျမှတျရမယျ။
မျောရငျဟိုအနနေဲ့လညျး ကွေးကွီးပေး ချေါယူထားတဲ့ ကစားသမားတဈဦးကို အသငျးမှာ လိုကျလြောညီထှဖွေဈမယျ့အခွအေနမြေိုး ဖနျတီးပေးသငျ့နပေါပွီ။ တကယျလို့ မနျစီးတီးကိုသာ ဖရကျဒျ ပွောငျးရှခေဲ့ရငျ သူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ဆို ဘာမှကို ပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။ အခုအခြိနျမှာတော့ ဘရာဇီးလျ ကွယျတဈပှငျ့ဟာ မနျခကျြစတာ လမျးမထကျမှာ လမျးပြောကျနပေါပွီ။ သူ အမွနျဆုံး လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ရောကျနိုငျပါစလေို့ပဲ ဆုတောငျးရတော့မှာပါ . .